10 Uninzi Imithombo Beautiful EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi Imithombo Beautiful EYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Train Travel Holland, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Zininzi iindawo ezintle kunye neempawu ezintle eYurophu. Emva kwekona nganye, kukho ilitye lesikhumbuzo okanye igadi onokundwendwela. Enye yezona ndawo zinomdla kwaye zibalaseleyo ngumthombo omangalisayo, kwaye sikhethe ngesandla 10 emithonjeni intle eYurophu.
Ezomculo, zigqithisile, Imithombo yaseYurophu iyamangalisa. Ukusuka eParis ukuya eBudapest, embindini wedolophu okanye kwisiqithi, la 10 imithombo emangalisayo ikulungele ukutyelelwa.
1. Umthombo iTrevi ERoma
Owona mthombo mkhulu nowona udumileyo eRoma ngumthombo waseTrevi. Lo mthombo umhle kangaka uphalale 2,824,800 cubic iinyawo zamanzi yonke imihla. kwakhona, kumaxesha amaRoma yayingumthombo wamanzi ophakathi. Ngaloo ndlela, uzobona ukuba umthombo waseTrevi kwiziphambuka zeendlela ezintathu "Tre Vie" iindlela ezintathu zomthombo.
Kwimeko apho ubungazi, Umthombo waseTrevi ngomnye wemimangaliso esixhenxe yaseYurophu. ngoko ke, ayothusi into yokuba owona mthombo mhle waseYurophu ubonise iimovie ezininzi, njenge Iholide yaseRoma.
Uphi umthombo weTrevi eRoma?
Umthombo ophefumlayo weTrevi kukuhamba nje kwemizuzu eli-10 ukusuka kwiSpanish Steps. Unokuthatha tram kwisikhululo seBarberini.
Eyona nto ibalulekileyo kumthombo weTrocadero ngumthombo waseWarsaw embindini. Ubume besitya, nge 12 imithombo yayijikelezile. ngoko ke, Indawo ye-Eiffel Tower kunye nomthombo ulunge kakhulu.
the imiyezo emihle kunye nemithombo ekuqaleni yayiyinxalenye yeTrocadero Palais, zadalwa kwi 1878 ngokuchazwa kwendalo iphela. Ukujongana nomlambo iSeine, ngasemva iPalais du Chaillot, nangaphambi kwe-Eiffel Tower, Umthombo weTrocadero ngu indawo yepikiniki egqibeleleyo eParis, naseYurophu.
Uyifumana kanjani iTrocadero?
Unokufika kwiiGadi zeTrocadero kunye nomthombo nge-metro, kwisikhululo seTrocadero.
Nazi 55 imithombo egadini yase Versailles, kodwa owona mhle kwaye uphawuleka ngumthombo waseLatona. Umthombo waseLatona waphefumlelwa ngu-Ovid's Metamorphoses, Umama waseLatona kaAppollo kunye noDiana, eboniswe nabantwana bakhe kulo mthombo uzukileyo.
Ukujongana neCanal Canal, ungabona ngokulula kwaye uthande umbono kaKing Louis XIV naphi na eVersailles. Ngexesha eliphakamileyo unokonwabela umboniso womculo okwenzekayo 3 amaxesha ngeveki.
Ufika njani eLatona?
Ibhotwe laseVersailles likwidolophu yaseVersailles, nje 45 imizuzu ngololiwe eParis. Ungathatha uloliwe uye kwisikhululo saseVersailles Chateau Rive Gauche. Ke kukuhamba nje okufutshane ukusuka kwisikhululo ukuya ebhotwe nasegadini.
La Rochelle ukuya kumaNantes amaXabiso oLoliwe
I-Toulouse ukuya kumaxabiso eLa Rochelle
IBordeaux ukuya eLa Rochelle Amaxabiso oLoliwe
EParis ukuya eLa Rochelle Amaxabiso oLoliwe
Owona mthombo womculo ubalaseleyo eYurophu ngumboniso wamanzi omculo kwipaki yomxholo we-Efteling. Uya kumangaliswa ngu 12 ukukhanya kwemizuzu kunye nomboniso wamanzi, Apho amasele aguqula amanzi abe ngumboniso weballet.
Inkqubo yomthombo wase-Aqunura yayakhelwe i-Efteling 60 usuku enazimanya ngalo. Ukushwankathela, umboniso womculo sisiphelo esihle kuhambo losapho ukuya kumnandi Ipaki yomxholo we-Efteling.
Ufika njani kuMthombo oShiyekileyo?
Le paki imangalisayo iyure nje ukusuka eAmsterdam, ke ilungele usapho olonwabisayo uhambo losuku ukusuka eAmsterdam.
5. 1o Uninzi Imithombo Ehle EYurophu: Umthombo weTrafalgar
I-Mermaids kunye neTritons zezona ziqingqiweyo ziphakathi kumthombo waseTrafalgar Square. kunjalo, ngokungafaniyo neminye imithombo, akukho mvelaphi emva kokukhethwa kwezi zilwanyana zaselwandle. Owona mthombo mhle eLondon ekuqaleni wawakhiwe ngaphakathi 1841 ukunciphisa indawo yababonisi.
Uya kufumana umthombo waseTrafalgar Square kanye phambi kweGalari yeSizwe eLondon. Ukwengeza, Kuya kufuneka uyazi ukuba kulapho abantu baseLondon beze ukuzonwabisa ngeKrisimesi. ke, uya kuba nesinye isizathu esihle sokutyelela enye yemithombo emihle kakhulu eYurophu.
Ufika njani kumthombo weTrafalgar eLondon?
Unokuhamba uye kwisikhululo setyhubhu yeCharing Cross ukusuka nakweyiphi na indawo eLondon.
IAmsterdam ukuya eLondon amaXabiso oLoliwe
Umda weTyrol yenye yezona ndawo zintle e-Austria, kunye nekhaya kwikomkhulu laseSwarovski. Umthombo waseSwarovski ubekwe kwi-Swarovski Crystal Worlds, ubunzima bokuzonwabisa kunye nokutya. Ngokwenene yenzelwe umenzi weglasi yekristale, Swarovski.
Umthombo ubumbeke njengentloko yendoda. Ngomnye wemithombo engaqhelekanga eYurophu, kwaye kufanelekile ukutyelelwa xa uhamba intaba e-Austria.
Ufika kanjani kwi Umthombo waseSwarovski in Innsbruck?
Unga ukuhamba ngololiwe ukusuka e-Innsbruck ukuya eSwarovski kwisithuba esingaphantsi kweyure.
EMunich ukuya e-Innsbruck amaXabiso oLoliwe
ISalzburg ukuya kwi-Innsbruck yamaxabiso oololiwe
I-Oberstdorf iya kwi-Innsbruck Amaxabiso oololiwe
I-Graz ukuya kwi-Innsbruck yamaxabiso oololiwe
Ijethi yamanzi, ijethi yamanzi ngesiNgesi, ngowona mthombo mde eYurophu onokufikelela kuwo 400 mitha. ekuqaleni, umthombo wakhiwa ukulawula uxinzelelo olugqithisileyo lwesityalo se-hydraulic eLa Coulouvreniere, kodwa kungekudala waba luphawu lwamandla.
ngoko ke, Kunzima ukuphoswa nguJet Deau xa undwendwele iGeneva. Inyaniso, ungayifumana indlela eya eLake Geneva, ukuba ulandela nje ijet yamanzi.
ILyon ukuya eGeneva Amaxabiso oLoliwe
I-Zurich iya eGeneva Amaxabiso oLoliwe
EParis ukuya eGeneva Amaxabiso oLoliwe
UBern waya eGeneva amaXabiso oLoliwe
Umthombo waseStravinsky kwiZiko lasePompidou ngumbulelo womculo kumqambi waseRussia, Igor Stravinsky. Imilebe ekhanyayo, umhlekisi, kunye neminye imifanekiso eqingqiweyo eyenza lo mthombo ungomnye wemithombo engaqhelekanga eYurophu. Uyilo lwenziwe ngumzobi uJean Tinguely kunye nomzobi uNiki de Saint Phalle. Bobabini amagcisa aneendlela ezahlukeneyo: Umzi mveliso weDadaist kwelinye icala, kwaye uqaqambile kwelinye icala. ke, kunye, Umsebenzi wabo ubhiyozela owona mculo weklasikhi ugqwesileyo wale nkulungwane yama-20.
Ngaphandle kwamathandabuzo, Umthombo waseStravinsky uya kuyithathela ingqalelo xa uwuthanda ngokusondeleyo. Eneneni kufana nokungqina intsebenzo yesekisi ekungeneni kweziko lasePompidou elidumileyo kwihlabathi.
Ndifika Njani Ku Umthombo waseStravinsky?
UFontaine Stravinsky usekungeneni kwiziko lasePompidou. Ungathatha iMetro ukuya kwisikhululo seHotele de Ville.
EParis ukuya eMarseilles Amaxabiso oLoliwe
EMarseilles ukuya eParis Amaxabiso oLoliwe
EMarseilles ukuya eClermont Ferrand Amaxabiso oololiwe
Owona mthombo mkhulu eHungary ubonakalisa umculo omangalisayo kunye nomboniso we-laser iyure nganye. Ngomhla kude kube ngu-Okthobha, lelona xesha lilungileyo lokundwendwela iMargaret Island eBudapest. Ungayonwabela ipikniki ngelixa ubukele umboniso wamanzi kunye nezibane.
Enye into eyenza ukuba umthombo weKrizikova ube yenye yeefayile 10 eyona mithombo mihle eYurophu, kukuba kukho isicwangciso somculo sabantwana kunye nabantu abadala.
Ndifika Njani Ku Umthombo waseMargaret Island?
Unokufikelela kumthombo waseMargaret Island kwiziko ledolophu laseBudapest ngetram.
Umthombo wokudanisa, Umthombo waseKrizik, imi kufutshane neziko lemiboniso ePrague. Ukuqala kwi 8 emva kwemini ukuya ezinzulwini zobusuku, uya kuba nakho ukonwabela ezona zibane zibalaseleyo kunye nomculo omnandi. Nazi 4 ibonisa xa nganye yahluke ngokupheleleyo kwenye ngomculo nezibane.
Umthombo womculo waseKrizik wakhiwa ngaphakathi 1891 kwiziko lemiboniso. Oko bekusonwabisa izihlwele ukusukela ngoko. Ngorhatya lomboniso iya kuba sisiphelo esihle sosuku oluhle ePrague.
Ingaba ndifika kanjanani e Krizik?
Unokufikelela ngokulula kumthombo waseKrizik ngetram kwisikhululo saseVystaviste.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti etreyini angabizi kakhulu kuyo nayiphi na imithombo emihle eYurophu.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog "10 Uninzi Imithombo Beautiful EYurophu”Kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-fountains-europe/?lang=xh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, kwaye ungayitshintsha i-tr kwi-pl okanye kwi-nl kunye nezinye iilwimi ozikhethileyo.
Imimangaliso	Ukujikeleza iYurophu	Imithombo	Imithombo e-Yurophu	UMthombo woMculo	train Travel